SmartSet၊ သေးငယ်တဲ့ထုတ်လွှင့်သူတွေအတွက် template-based Augmented Reality နဲ့ Virtual Sets | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » SmartSet, template ကို-based တိုးပွား Reality နှင့်အသေးစားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ပေးသည်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအသေးစားနှင့်ဒေသခံတီဗီဘူတာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, အရည်အသွေးမြင့် template ကို-based ဖြေရှင်းချက်အကွာအဝေးကိုမိတ်ဆက်။
Virtual သတ်မှတ်မည်, လုပ်ခဲ့ပြီး Reality နှင့် Motion Graphics ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏လက်ရှိနှင့်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်အကွာအဝေးကိုဖြည့်ဖို့ NAB မှာ template ကို-based ဖြေရှင်းချက်၏သစ်တစ်ခုအကွာအဝေးမိတ်ဆက်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထံအပ်နှံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူတစ်အထူးကုကုမ္ပဏီ, ။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ template ကို-based ထုတ်ကုန်ဝေဟင်မှထွက်ကစား Pre-defined ရည်ရွယ်ချက်-built တင်းပလိတ်များ အသုံးပြု. အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောအကြောင်းအရာများကို, အပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီကို template ကိုအဘို့အခွင့်ပြုထားသကဲ့သို့မတ်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါအရာ။ မိမိတို့အစုံဖန်တီးရန်အရင်းအမြစ်များကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သေးငယ်နှင့်ဒေသခံတီဗီဘူတာရုံထို့နောက်အကြီးရှာဖွေနေအစီအစဉ်များကိုပေးနိုင်ပါသည်။
SmartSet ယင်းစျေးကွက်အတွင်းရှိ၎င်းတို့၏ယှဉ်ပြိုင်တိုးမြှင့်မည်သည့်ထိရောက်သောကို virtual စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်ကုန်ကျထားတဲ့အဆင့်မြင့်ပေးဖို့အသံလွှင့်မီဒီယာကဏ္ဍတွင်ဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်တစ်ဦးဝယ်လိုအားတစ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ SmartSet ဖြစ်ပါသည် template ကို-based ကို virtual စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက် အဆိုပါအစီအစဉ်များအတွက်လိုအပ်မှုမရှိဘဲအဆင့်မြင့်မြင့်အရည်အသွေးနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ရန်နှင့်တိုးပွား Reality applications များထောက်ပံ့ပေးသောသေးငယ်နှင့်ဒေသခံတီဗီဘူတာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ Templates ကိုမလိုအပ်, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးလျှောက်လွှာများအတွက်စိတ်ကြိုက်နှင့်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသို့မဟုတ်ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ Store ကမှာအွန်လိုင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ template ကို element တွေကိုပြုပြင်နိုင်သည့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အတိုင်းအတာအထိရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ခွင့်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ template ကို၏စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေဖို့ကန့်သတ်နေသောသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဤသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကုန်ကျစရိတ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်အသေးစားထုတ်လွှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
NAB 2017 မှာပြသနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် AstonElectionsရည်ရွယ်တစ်ခုအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်လျှောက်လွှာ ထုတ်လွှင့်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း application များအတွက်ဂရပ်ဖစ်လွှမ်းခြုံ ၏ကျယ်ပြန့်ပါသည်လိုအပ်သည့် ဒေတာ-မောင်းနှင်ဂရပ်ဖစ်။ Aston ရွေးကောက်ပွဲအများဆုံးအမြင်အာရုံထိခိုက်မှုများနှင့်အစီအစဉ်ကိုတိုးမြှင့်ဘို့ရှုပ်ထွေးပြီးအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များဒေတာတင်ဆက်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုရုံ template ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်လျှင်, အမျိုးမျိုးသောပြင်ပအရင်းအမြစ်များမှ လာ. , နောက်ဆုံးတော့လေကြောင်းကထွက်ကစားနိုင်ပါတယ်သောအချက်အလက်များ, configuring လိုအပ်, ရှေ့ဆက်အတော်လေးဖြောင့်သည်။
၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုပူးတွဲတင်ပြထားစဉ်, ဒါဝိဒ်သည်အလက်ဇန်းဒါး, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ "ကိုအရကြီးမားတဲ့အငယ်အားလုံးထုတ်လွှင့်, ကောင်းသောအရည်အသွေး, အကြီးအကြည့်အကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော်သေးငယ်ထုတ်လွှင့်မကြာခဏအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှုအကြားရွေးချယ်ဖို့အတင်းအကျပ်ကြသည်, ဤအတူကူညီပေးဖို့, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအားလုံးယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဆပ်အရည်အသွေးနှင့် Real-time သေချာထားတဲ့သူ့ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ Estudio ဆပ်အင်ဂျင်ပေါ်တွင်တည်ဆောက် template ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးတီထွင်ထားသည် 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုတင်းပလိတ်များမဆိုကြင်နာများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်။ "
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ် high resolution ကတော့ပုံရိပ်တွေများအတွက် Amaya ဇာလဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]
3D ဂရပ်ဖစ် လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ motion ဂရစ်ဖစ်ဖြေရှင်းနည်းများ template ကို-based ဖြေရှင်းနည်းများ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ကို virtual set ကို ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းချက် 2017-05-30
ယခင်: InfinitySet3- အံ့သြဖွယ်တိုးပွား Reality အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ
နောက်တစ်ခု: VideoCAVE တစ်ဦးရောနှောထားသော Reality လျှောက်လွှာ